हजुरबाले ‘हाम्रो परिवारको रेखदेख गर्नु’ भनेर तेजबहादुरलाई भनेका थिए, तर नातिले उनकै परिवार..? – Sandesh Press
हजुरबाले ‘हाम्रो परिवारको रेखदेख गर्नु’ भनेर तेजबहादुरलाई भनेका थिए, तर नातिले उनकै परिवार..?
September 12, 2021 273
संखुवासभा । मादी नगरपालिका– १ उम्लिङ खोलागाउँको घट्नामा सं’लग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका लोकबहादुर कार्कीले आफूले एउटै चि’र्प’ट’ले ६ जनाको पालैपालो ह’ ‘त्या गरेको बताएका छन् । आइतबार प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले आफूले ह’ ‘त्या गरेको स्वीकार गरेका हुन् । प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुणबहादुर बिसीले कार्कीले योजनाबद्ध नभई आवेगमा आएर ह’ ‘त्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको जानकारी दिए । घटनाको अघिल्लो रातभर कार्की नसुति विक्षिप्त मा’न’सिक अवस्थामा रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मृ तक तेजबहादुर कार्कीप्रति प्रतिशोध साँध्नकै निम्ति उनले सो घटना घटाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
कार्कीका बुवाको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले म’र्नेबेलामा तेजबहादुरलाई रेखदेख गरिदिन भनेका थिए। त्यसैले तेजबहादुर घरमा बेला बेलामा जाने गर्थे। त्यही क्रममा सम्झाउने, काम अराउने मात्रै नभइ हप्काउने समेत गर्थे। यो कुरा कार्कीलाई मन पर्दैनथ्यो। उनले यो कुरालाई ग’म्भीररुपमा लिँदै आएको प्रहरीसमक्ष बताएका छन्। कार्की बेलाबेलामा आ’क्रो’शि’त हुने, नजिकमा रहेकाहरुलाई जे पायो त्यहीले आ’क्र’म’ण गर्न खोज्ने,राति नसुत्ने र एक्लै हिँड्ने र घरका सदस्यसँग झैं’झ’ग’डा गर्ने स्वभावको रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
उनी पटकपटक विदेश गएका थिए। विदेश जाँदा लिएको ऋण, आमाको उपचार र किरिया खर्चको जोहो गर्न नसक्दा जग्गा समेत बेचेका थिए। जुन कुराले उनलाई हिनताबोध गराइरहेको हुन्थ्यो। यी विभिन्न कारणले उनी यतिठूलो अ’प’रा’धि’क घटना घटाउन पुगे। प्रहरीलाई दिएको बयानअनुसार अभियुक्त लोक बहादुर कार्कीले नातामा काका पर्ने तेजबहादुर कार्की घरबाट निस्किएको आफ्नो शौचालयमा देखेका थिए । आफूलाई सधैँ हे’प्ने, सापटी लिएको रकमको ब्याज लिएको आदि कुराले लोकबहादुर काका तेजबहादुरप्रति रुष्ट थिए । ह’ ‘त्याको अघिल्लो रात पनि लोकबहादुरको मनमा अनेकौँ कुराहरू खेलेका थिए ।
सबैभन्दा पहिले जब बिहानै तेजबहादुर घरबाट निस्किन लागे लोकबहादुरले तेजबहादुरलाई आ’क्र’म’ण गर्ने सोच बनाए । अनि घर नजिकै रहेको दाउराको चाङबाट एउटा चि’र्पट निकाले, अनि तेजबहादुर अगाडि बढेपछि उनी खोल्सीमा पुगेर तेजबहादुरमाथि आ’क्र’म’ण गरे । पछाडिबाट टाउकोमा पटक-पटक प्र’हा’र गर्दा तेज बहादुर अनियन्त्रित भइ भिरालो जमिनबाट लडेका थिए। ‘लोकेले मलाई मा’र्यो’ भन्दै उठ्न खोज्दा पुन: टाउकोमा प्र’हा’र गरी घोप्टो पारि ल’डा’एका थिए।
हा’रगु’हार गरेको आवाज सुनेपछि तेजबहादुरकी श्रीमती कमला र बुहारी रन्जना समेत घटनातर्फ आए। उनीहरुमाथि पनि लगातार चि’र’प’ट प्र’हा’र गरे। त्यसपछि घर नजिकै बाटोको डिलमा आएका २ जना नाबालक दिपेन र गोमालाई पनि ल’खे’टी ल’खे’टी ह’ ‘त्या गरे । घरको पछाडि खोले पकाउँदै गरेकी पार्वता कार्कीको टाउको प’टक-प’टक भि’त्ता’मा ठो’क्या’इ ह’ ‘त्या गरी घर फर्केका थिए। सबैको ह’ ‘त्यापछि घर फर्किएका लोकबहादुरले घटनामा प्रयोग गरेको चि’र्प’ट अ’गेना’मा हाली न’ष्ट गरे।
घटनास्थलमा शवहरु ४ वटा फरक फरक स्थानमा भेटिएका थिए। सबैभन्दा पहिले शारीरिक रुपमा बलिया तेजबहादुरलाई पछाडिबाट आ’क्र’म’ण गरी ह’ ‘त्या गरेका थिए। त्यसपछि महिलाहरु, नाबालकहरु र वृद्धमाथि एउटै चि’र्प’ट’ले हा’ने’र ह’ ‘त्या गरेको पाइएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ।
सबैको ह’ ‘त्या गरेपछि घटनास्थलबाट १०० मिटर टाढा रहेको आफ्नो घरमा पुगेका थिए । ह’ ‘त्यापछि लोकबहादुरले अभियुक्तलाई चाँडो पक्राउ गर्न भन्दै प्रहरीसँग भन्दै आएका थिए । उनले अनुसन्धानमा सहयोग मात्र गरेनन्, प्रहरीलाई खानासमेत बनाएर खुवाउँदै आएका थिए । उनी ह’ ‘त्या अनुसन्धानमा प्रहरी खटिएका बखत त्यतै देखिन्थे, पत्रकार तथा स्थानीयसँग घटनाबारे कुराकानी पनि गर्थे। झट्ट हेर्दा ‘सामान्य’ लाग्ने उनले कसरी यतिधेरै मानिसको ह’ ‘त्या गर्लान्? सुरूमा त प्रहरी नै अन्योलमा थियो।
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, भाद्र २८ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextबुढेसकालको मायाप्रीतिले ५६ बर्से श्रीमान हजुरआमा लिएर फरार, बुढेसकालमा बैँश चढेपछि, रक्सि खान जाँदा साहुनी हजुरआमा उडाए (भिडियो)
फेसबुकमा चिनजान भएकी युवती मन परेपछि नेपाली युवक हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर गए प्रेमिका लिन
आज देखि टिकटक बनाउन नपाइने, बनाएमा कारबाही गरिने